ॐ ॐ ॐ पशुपतिनाथले हामी सबैको र’क्षा गरुन || हेर्नुहोस : वि.सं.२०७७ भदौ – भदौ २९ गते सोमबारको राशि,फल
September 14, 2020 September 14, 2020 adminLeaveaComment on ॐ ॐ ॐ पशुपतिनाथले हामी सबैको र’क्षा गरुन || हेर्नुहोस : वि.सं.२०७७ भदौ – भदौ २९ गते सोमबारको राशि,फल
आजको पञ्चाङ्ग: बि.सं.२०७७ साल भदौ २९ गते सोमबार ई. सं. २०२० सेप्टेम्बर १४, नेपाल सम्बत ११४० ञंलाथ्व द्धादशी प्र,माधि नामक संव,त्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, असोज कृष्ण द्धादशी, चन्द्रमा कर्कट राशिमा, पुष्य नक्ष,त्र, वरि,यन यो,ग, कौलव क,रण । नेपालमा सूर्योदय बिहान ०५ः४९ बजे, सूर्या,स्त साँझ ६ ः १० बजे हुनेछ । आज जन्म लिने बच्चाको क,र्कट राशि हुनेछ ।
आज मह,त्वपूर्ण का,र्यका लागि बाहिर निस्कनु पर्दा आफ्नो पुरा शरिर ऐ,नामा हेरेर जुनसकै दि,शाको या,त्रा गरेपनि शुभ फ,ल प्रा,प्त हुनेछ । आजको दिन द्धा,दशी श्रा,द्ध र रा,ष्ट्यि वाल दि,वश परेको छ। कुनै मह,त्वपूर्ण कार्यको शुरु,वात वा शुभ या,त्रामा नि,,स्कन आजका लागि शुभ समय बिहान ५ बजेर ४९ मिनेट देखि ११ बजेर ५९ मिनेट सम्म छ । यो समय नेपालको रा,ष्ट्रिय समयमा आधा,रित समय हो । ठाउँ अनुसार समय, तिथि, नक्ष,त्र, ईत्या,दीमा पनि अन्तर हुनेछ ।
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – कामध`न्दा र प्रया`समा ढि`लो गरी सफ`लता पाउन सकिने छ । घरगृ`हस्थीमा धेरै समय ख`र्चनु पर्ने योग छ । आक`स्मिक रूपमा स्वा`स्थ्यमा सम`स्या आउनसक्छ । छोराछोरीको स्वा`स्थ्य एवं प`ढाइप्रति जि`म्मेवारी बो`ध हुनेछ । मातापितासँगको सम्ब`न्धमा समेत नि`राशा भा`व आउनसक्छ । डु`बेको ध`न उका`स्न दौ`डधू`प गर्नुपर्छ ।
बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) – राजनै`तिक र सामाजिक प्रति`ष्ठा काय`म राख्न ल`गानी गर्ने समय आएको छ । ब`न्धुबा`न्धव र दाजुभाइको सहयो`ग लिनसकिने छ । व्या`पारिक वा दैनिक कामहरू सन्तो`षज`नक ढं`गले सम्पन्न हुनेछन् । वैदे`शिक व्यापार, कृ`षिव्य`वसाय र नोकरी गर्नेका लागि सन्तो`षज´नक रहने छ । आ`म्दानीमा क`मी आउने छैन । अरुको भ`लाइका लागि दौ`डधूप गर्नु पर्नेछ । यात्राको सम्भा`वना छ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह०)– राम्रो नराम्रो दुबै खा`लका परि’णाम प्रा,प्त हुनेछ । वित्तीय क्षेत्र र व्यापा´रिक ल´गानीका सा`नातिना फु´टकर कामका लागि राम्रो समय छ, तर दूर`गामी प्रभा`वको आर्थिक प्रयो`जनका लागि अहिलेको समय सकारा,त्मक देखिंदैन । दैनिक आम्दानीका मार्गमा बृद्धि हुनेछ, तर मानप्र`तिष्ठा र ख्या´तिमा आँ`च आउने सम्भा´वना छ । घु`मघाम र भेटघा´टका लागि मन ला´ला´यित हुनेछ ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) – व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तो`षजनक ढं`गले सम्पन्न हुनेछन । खान`पिनका परि`कार प्रा`प्त हुने र भ्रम`ण, प`र्यटन, रम`झम तथा सामा`जिक काममा सह`भा`गी हुनु पर्नेछ । धा`र्मिक र सा`माजिक काममा मन जान सक्छ । दा`नपु`ण्यका क्षे`त्रमा लगा´नी हुन सक्छ । घरपरिवारबाट साथसह`योग प्राप्त हुनेछ । कतिपय राम्रा अव`सरहरू प्राप्त हुनेछन, तर मन दो`धार नबनाउनु होला, नत्र तपाईंले तिनलाई पूर्ण उप,यो,ग गर्न सक्नुहुन्न । व्यव`सायिक क्षेत्रबाट पनि ला,भ मिल्ने यो´ग छ ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) – सानातिना सरसा´मान हराउन सक्ने वा चो’री हुने स’म्भावना छ । दूर´दराजबाट प्रस´न्नता र खुसीको समा´चार आउन सक्छ । परोप´कारका क्षेत्र´मा काम गर्न मन लाग्नेछ । रक,मको कारो´बार र ले´नदेनमा वि´वाद आउने स´म्भा´वना छ, यद्य´पि आज आ´र्थिक स’मस्या हल गर्ने उ,पाय दे´खा पर्नेछ । ठूलो म,हत्वाका,ङ्क्षा राखेर धनलगानी गर्नु राम्रो हुनेछैन ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) – मन फु´रुङ्ग हुनेछ । आ´त्मवि´श्वास र परा´क्रममा वृ´द्धि हुनेछ । कल`का`रखाना ´र ब´न्दव्या´पारमा फाइ´दा हुनेछ । श’त्रमाथि वि’जय प्राप्त हुनेछ । सा`माजिक का`मबाट प्र´शंसा प्राप्त हुनेछ । धार्मिक÷सांस्कृ´तिक सभा´समा´रोहमा सरिक हुने स’म्भावना छ । नो’करी गर्नेले मान’सम्मान पाउने छन् । ला´भदा´यक या`त्राको सम्भा`वनालाई नका`र्न सकिंदैन ।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) – समाजको नेतृ`त्व बहन गर्नुपर्ने समय भएकाले सामाजिक क्षेत्र र नोकरीबाट मानस`म्मान मिल्नेछ । साथीभाइसित भेट`घाट हुने यो`ग छ । खा`द्यान्नका परि`कार तथा मेवामि`ष्ठान्न मिल्ने समय छ । जग्गाज`मिनको कारो`बारबाट फा`इदा लिन सकिने छ । रोकि`एका सर`कारी काम सल्झा`उने राम्रो स`मय छ । स्वा`स्थ्य स`बल रहनेछ ।
बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) – अर्काको भ`र पर्नुभन्दा पनि आफ्नै प्रया`समा गरिएका कामले फाइ`दा हुनेछ । धा`र्मिक, सा`माजिक र पारमा´र्थिक काममा खट्नु पर्नेछ । साँझपख शुभ समाचार आउन सक्छ । घरपरिवारबाट टाढा बस्नेहरूमा आज अ`चानक वै`राग्यको भा`वना पलाउन सक्छ ।
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे)– बोलीको वि’परीत अ`र्थ लाग्न सक्छ । श’रीर भा,रि र मन अ´स्थिर रहने सं`केत छ । आ´लस्य र थका`नको अ´नुभू´ति हुनेछ । बाटो का´ट्दा वा या`त्रा गर्दा स`चेत हुनुपर्छ । या´त्रा नगरेको जाति हुन्छ, चो’टपटकको भ`य हुनेछ वा या`त्राका क्रममा झ´र्कोलाग्दो र धन`माल हरा`उने सम्भा`वना पनि देखिंदैछ । परि`वारका स`दस्य वा नजिकैको साथीले पनि तपाईंका मनका भा´वना बु´झी दिंदैनन ।
मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) – प्रे`ममा सफ`लता प्राप्त हुनेछ । अभिभा`वकव`र्ग वा वि`शिष्ट व्यक्तिको सहयो`ग प्राप्त हुनाले का´र्य सम्पन्न हुनेछ । सरकारी जागिरेले ब`ढुवा, प्र`शंसा र पुर`स्कार पाउन सक्छन । मानप्र`तिष्ठा र सा´माजिक मर्या´दामा अभिवृ´द्धि हुनेछ । कतै छोटो दु´रीको ला´भदा´यी या´त्रा पनि हुन सक्छ । पा`रिवारिक जीवनमा रमाइ´लोपना आउने छ । घरायसी का`ममा समय र ध`न ख`र्च हुनेछ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) – सामा,न्यतया झै’झगडा र वादविवादमा फँ’स्नु राम्रो हुँदैन, मु,द्दामामि,ला र दैनिक काममा चुनौ’तीको सा`मना गर्नुपर्छ । आफन्त र मित्रवर्गको सहयो`ग पाइने समय नै छ । बन्दव्या´पार र साझे´दारीबाट राम्रो प्रति`फल प्राप्त हुनेछ । आफ्नै स,वारी सा´धनमा रमाइलो र टाढाको या,त्राको सम्भा´वना समेत छ । बन्दव्या´पार र उद्यो´गध´न्दामा फा´इदा छ ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) – सन्त´तिका क्रि´याक,लाप´मा सा´मान्य सम´स्या देखिन सक्छन । जा´नकार व्यक्ति वा गु´रुजनले स’हयोग गर्नाले आत्म’बल बढ्ने छ । ब´न्दव्या´पारबाट ला’ भ नै हुनेछ । प´ठनपा´ठन र चि`न्तन मननमा ध्या`न के`न्द्रित हुनसक्छ । पारि,वा,रिक सहयो,ग र स,द्भावमा क,मी आए पनि आफैंले गरेको नि,र्णय फ,लदा,यी हुनेछ ।
प्र.धानमन्त्रीले नै इ,च्छा नदेखाएका का,रण कुलमान प्रा-धिकरणवाट विदा हुँदै
कुलमानलाई पुनःप्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ल्याउन माग गर्दै डडेल्धुरामा राँके जु’लुस,,, हेर्नुहोस्।
पाथिभरा माताले हामी सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन,आज मंसिर,१४ गते आईतबार तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
पाथीभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, कार्तिक ०२ गते । आईतबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ ?हेर्नुहोस राशिफल पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नुहोस।